China Cast steel Biyo raaci si wadajir ah loo xoojiyay soo -saareyaasha sariirta caagga ah ee biibiilaha la taaban karo. Jeesjees
Gelinta & Guddiga Dam
Gear Waayo, Mashiinka Hobbing Gear
Qaybaha ridaya ee loogu talogalay Dhuxusha
Qalab loogu talagalay Burburiyaha
Tuuri hiitarka aluminium-silikoon
Tuur birta giraanta caag ah si wadajir ah loo xoojiyay tuubo la taaban karo ...
Birta tuur si wada jir ah u xooji moul biibiile la taaban karo ...
adeegga alaabta birta kabka ah
adeegga shubka aluminium
Biraha biraha ah Biyo wadaaga la xoojiyay sariirta caag ah ee la taaban karo
Caaryada tuubada la taaban karo/giraanta giraanta hoose/saxaarad hoose/sariirta hoose, waa qaybo dayactir ah oo waajib ah inta la soo saarayo beeb la taaban karo/sibidh. Waxaa loo adeegsadaa taageeridda/kor u qaadista qafiska xoojinta, caaryada tuubada dibedda, iyo dhammaan agabyada la taaban karo inta lagu jiro soo-saaridda tuubo, sidaa darteed giraanta hoose/saxarka hoose/sariirta hoose waa inay ahaato mid aad u xoog badan oo adkaysi u leh. Ka dib marka la dhammeeyo wax soo saarka tuubo, sariirtaha hoose/giraanta hoose/saxaaradda hoose waxay wali sii wadi doontaa taageeridda tuubooyinka shubka/sibidhka ee la xoojiyay ilaa tuubada si buuxda looga bogsado, ka dibna sariirta/giraanta/saxarka ayaa hoos loo dhigi karaa oo dib ayaa loo isticmaali doonaa dib -u -warshadaynta soo socota.
Giraanta hoose/sabuullada/saxaaraddu waxay ka samaysan tahay bir bir ah, bir ductile ah, ama waxay ka samaysan tahay xaashida birta kaarboonka iyadoo la feerayo habka/habka cadaadiska/geedi socodka shaabadaynta.
Shirkaddayadu waa mid aad u xirfad badan oo khibrad u leh soo saarista sagxadaha caagga ah ee biibiilaha la taaban karo/giraanta hoose/saxaarad hoose in ka badan 6 sano. Waxaan u soo saarnay in ka badan 7000pcs oo sariirta hoose ah oo daboolaya baaxadda cabbirka laga bilaabo 300mm illaa 2100mm oo loogu talagalay macaamiisheena dibedda ah.
Sariirtayaashu waa qaybo waajib ah inta ay soo saarayaan tuubo biyo -shub ah oo la taaban karo/sibidh la xoojiyay, waxaa la dhigayaa hoosta iyo gudaha caaryada tuubada si loogu taageero caaryada tuubada dibedda iyo qafiska xoojinta. Waa inay noqotaa mid ku filan si ay u taageeri karto tan alaab ah dusheeda, sidaa darteed waxaan ku soo saarnay bir bir ah oo gaar ah, waxay leedahay astaamaha xoogga sare, iska-caabbinta, ma laha isbeddel, nolol dheer.
Xogta farsamada ugu muhiimsan ee alaabta
Bir kabka ah oo gaar ah
Tuubada sibidhka si wadajir ah:
Giraanta giraanta caagga ah
Baaxadda sariirta sariirta:
225mm ilaa 2100mm
Qalalaasaha dusha shaqada:
Farsamada wax soo saarka:
Kabka, dhejinta, alxanka, farsamaynta
Miisaanka unugga alaabta:
7kgs ilaa 400kgs
Alaabada la habeeyay iyadoo loo eegayo sawirrada macmiilka
Habka farsamada wax soo saarka ugu weyn
Sawirada mold furitaanka caaryada
*DEKADDA FOB XINGANG
*Sariirta birta ah ee lagu qaado culeysyada sariirta + saliid lagu ruxayo ka hortagga miridhku + xadhig silig bir ah si loo sugo baakadka + filim caag ah oo lagaga hortago boorka
*In lagu raro weel 20'OT ah
* habka lacag bixinta: dhigashada T/T, T/T
* gaarsiinta: sida caadiga ah gudahood 3month ilaa 7month ku xiran tahay tirada si
Sariirtahan waxaa loo isticmaalaa warshadaha waxsoosaarka sibidhka, si loo soo saaro tuubooyin shub ah oo la xoojiyay. Iyada oo ay aad u badan yihiin baakadaha, mashiinkaaga samaynta biibiilaha ayaa soo saari kara tuubo aad u dhakhso badan, ku dhawaad ​​tuubo ayaa la soo saari karaa 2-3 daqiiqo kasta.
Sariirtaha waxay ku hoos jiraan soo -saarka tuubo
Sawirka biibiilaha wadajirka ah ee giraanta lagu shubo ee lagu soo saaray santuuqyada FJ
Hore: adeegga alaabta birta kabka ah
Xiga: Tuur birta giraanta caagga ah si wadajir ah loo xoojiyay sariirta caag ah oo la taaban karo
Sariirtaada caaryada caaryada la taaban karo
Xoojiyay sariirtaada caaryada tuubooyin la taaban karo